नेपालकी छोरी सम्झना खनाल प्रतिष्ठित एशियन अवार्डबाट सम्मानित « Janaboli
नेपालकी छोरी सम्झना खनाल प्रतिष्ठित एशियन अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौ । एशियन युथ इनोभेटिभ अवार्ड –२०१८’ बाट सम्झना खनाल सम्मानित हुनु भएको छ । भारतको पञ्जाबमा भएको ‘१३ औँ एशियाली मकै सम्मेलन’मा कीर्तिपुरकी खनाललाई नयाँ प्रविधिमार्फत मकै बालीको उत्पादन बढाउने अनुसन्धान गरेवापत उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषिमा स्नातक खनालले गत वर्ष झापामा मकैको पोषिलो र गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो ।
पञ्जाब कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डिएस डिलियन र मेक्सिकोका कृषि वैज्ञानिक मार्टिन करोप्टले उक्त सम्मान प्रदान गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा चीन, अमेरिकालगायत विश्वका २२ मुलुकका ३०० भन्दा बढी युवा वैज्ञानिकको सहभागिता थियो । प्रत्येक तीनतीन वर्षमा हुने सम्मेलनमा मकैमा अनुसन्धान गरेका ३५ वर्षमुनिका युवा वैज्ञानिकको सहभागिता हुने गरेको छ ।
सम्झना अखिल (क्रान्तिकारी) त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय समितिकी सचिव तथा नेपाली जुझारु नेत्री हुनुहुन्छ । विश्वका बैज्ञानिकहरु उपस्थित १३ औ एसियन मेज कन्फरेन्सबाट सम्झना खनालले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान को कदर गर्दै यो अवार्ड दिइएको हो । अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई सहित थप प्रगतिको शुभकामना।
यी नेताको यस्तो विवादित अभिव्यक्ति : पशुपति शर्मालाई कालो मोसो दल्नुपर्छ !
काठमाडौं । पछिल्लो समय पशुपति शर्माले गाएको गित “लुट्न सके लुट कान्छा” बोलको गितलाई सरकार
“लुट्न सके लुट कान्छा” बोलको गीत बारे यस्तो आयो ओली सरकारको आधिकारीक धारणा
प्रहरीले शकुसल उद्धार गर्यो कालिञ्चोक भगवती मन्दिर दर्शनमा फसेका ७०० पर्यटक
जिरी । नेपाल प्रहरीले फेरि अर्को गौरव गर्न लायक काम गरेको छ । प्रहरीले हिउँमा
संसारलाई पछि पार्दै नेपालकी वन्दना राणा राष्ट्रसंघीय कमिटीको उपाध्यक्ष !
काठमाडौं । नेपाली चेलीलाई अमेरिकामा उच्च सम्मान मिलेको छ । नेपाली महिला अधिकारकर्मी एवं सञ्चारकर्मी